ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ဘာတေးလ်၏ ဆောင်းပါးသစ် ကို သုံးသပ်ခြင်း။ Bertil Lintner's recent article: (Myanmar) Old Atrocity and New Implications
by Aye Aye Soe Win on Wednesday, October 31, 2012 at 2:31pm ·
Bertil Lintner's recent article: (Myanmar) Old Atrocity and New Implications
သူ. စူး ရှတဲ. ကလောင် နဲ. တည်.တည်.ပစ်၊ တည်.တည်.ရေး၊ ဒေါင်.စေ.လေ တဲ. သတင်းသမားလည်းဖြစ်၊ မြန်မာပြည်အကြောင်းအထူး ကျွမ်း ကျင်တဲ. စာရေးဆရာ လို. ကျော် ကြားလေတဲ. ချင်းမိုင် အခြေစိုက် ဘာတေး လင်.တ်နာ က Asia Times အေရှား တိုင်းမှာ ဒီနေ.ပဲ ဆောင်းပါးတပုဒ်တင်ဆက်ခဲ.ပါတယ်။သူ. ဆောင်းပါး ရဲ. ခေါင်းစဉ်က Old Atrocity and New Implications အတိပ်ကရက်စက်ကြမ်းကြုပ်သတ်ဖြတ်မှု နှင်.တကျော.ပြန်အသစ်ပေါ်လာသော ရှုတ်ထွေးမှု များ ( မြန်မာနိုင်ငံ) လို. ဆိုရပါမယ်။
သူ. အမဲစက်ကြီး ရှိပါရဲ. သူ.လူတွေက ဘာကြောင်. အပြောမခံကြလဲ ဆိုတာတွေ ဆက်စက်စဉ်းစားဖို.လိုပါတယ်။ ခံရသူတွေအတွက် ဘယ်တုန်းကမှ တရား မျှတစွာ အကြည်.မခံခဲ. ရတဲ. ဒီဇတ်လမ်း ကို၊ တချိန်ကတော. စပိုင်တွေ သုတ်သင်ရေး လို. သူတို. ကျူးလွန်သူတွေဖက်က က ခေါင်းစဉ်တပ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ မှာ အေဘီက ထုတ်တဲ. စာ တမ်းမှာ လည်း စပိုင်တွေမို. လုပ် ရပါတယ် ပဲ ထပ်ပြောခဲ.ပါတယ်။ ဒါပေမဲ.၊ အမှန်က ၂၀၁၂ နွေမှာ ထွက်လာတဲ. ဦးမောင်မောင် ရွှေကရ၀ိတ် ရဲ. စာအုပ်ခေါင်းစဉ်လိုပဲ၊ ဘယ်ဒေါင်. ဘယ်ကွေ.ကကြည်.ကြည်. ဒီ မိုကရေစီ ဘက်တော်သား ဆိုတဲ. အချင်းချင်းကြားထဲ ရက်ရက်စက်စက်ဇတ်တူသားစားခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘာတေး က အတည်ပြုပေးသွားပါတယ်။ ၁၉၉၂ ဇူလိုင်လ မှာ ဘာတေး ဒီ အကြောင်းအရာအပေါ်မှာပဲ Far Eastern Economic Review က ဆောင်းပါးတပုဒ် ရေးခဲ.ပါသေးတယ်။ အဲဒီ. အချိန်က ဖြစ်ပြီးစ လေး ငါး လ အကြာမှာဆိုတော.၊ ပြုသူတွေ အချိန်နဲ. အမျှ ပြန်ရလေမဲ.ပြစ်ဒဏ် ကို ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို. စောလွန်းနေသေးတဲ.ကာလလို. ဆိုရမယ်။ ဒါပေမဲ. နှစ်၂၀ အကြာ ခု ၂၀၁၂ မှာတော. ၊ ဒီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကြီးရဲ. အကျိုးသက်ရောက်မှု တွေ က တစစ ပေါ်လာပါပြီ။
NED National Endowment for Democracy က မသိတာလား။ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာလား။ ဒါမှ မဟုတ် အသိပေးမှုမှာ ဖိအားသိပ်မပါလို.လား။
ဒါတွေ ကို စာဖတ်သူတွေက ဆက်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ( ဖြတ်ပြောရမယ်ဆိုရင် အမေရိက က သူသူငါငါ နိုင်ငံသားတွေ ပေးနေတဲ. အခွန်တွေနဲ. ဒီက အစိုးရနဲ.ဆိုင်ရာ အဖွဲ. အစည်းတွေက ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလည်းထောက်ပံ.တယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုထောက်ပံ.တာ အလွန်မှားနေတယ် ဆိုတာကို တခါတလေ စိတ်ပေါက်လာမှ ထတိုင်တဲ.သူ အချို. ရှိပေမဲ.၊ NED ထဲက သူတို. အတွင်းလူများကပါ ပေါင်းစားထားလေတော.၊ ဒီ လောက် ကြီးမားတဲ.
မြန်မာပြည် အရှေ.မြောက်ပိုင်း ကချင်နယ်မြေထဲက အေဘီ အက်ိစ်ဒီ အက်ဖ် တောတွင်းစခန်းမှာ ဒီပြစ်မှုကို စိမ်ပြေနပြေ ကျူးလွန်ခဲ. တဲ.သူတွေ၊ အမိန်.ပေးခဲ.တဲ.သူတွေ၊ ကျူးလွန်မှုမှာ ၀င်မတားပဲ ရပ်ကြည်.နေခဲ.သူတွေ၊ ဒီ.အပြင် နှစ် ၂၀ လုံးလုံး တုပ်တုပ်မလှုပ် အပြစ်ကို ၀န်မခံခဲ.တာတွေ၊ ပြီးတော. တာဝန်ရှိတဲ. အေဘီ ဥက္ကဌနိုင်အောင် နဲ. ကျူးလွန်သူများ ကို အနောက်နိုင်ငံတွေ က အန်ဂျီအို အချို.နဲ. ငွေပေး ထောက်ပံ.နေတဲ. အဖွဲ.အစည်းတွေ။ သူတို. တုပ်တုပ်မလှုပ် မြုံနေ၊ တမင် အသံတိပ်ပေးနေတာတွေ ကိုလည်း ဘာတေးက အများကြီး မရေုးပဲ၊ တကြောင်း တပုဒ်နဲ.ပဲ အလွန်ပြည်.စုံစွာ ရေးသားခဲ.ပါတယ်။
ကျမမြင်တာကတော. ဒီလိုပါ။ ဘာတေးရဲ. ဒီဆောင်းပါးမှာ၊ဒါတွေပေါ်လွင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ.နည်းတွေကို ပဲ ဆက်တိုက်သုံးရတော.မယ်။
(သုံးသပ်ချက်--တိုင်စာတွေ ကန်.ကွက်စာတွေ ထိရောက်မှုသိပ်မရှိခဲ.ပါ။ ပြည်ပနယ်ခြားအုပ်စုများ နိုင်ငံရေး သို.မဟုတ် စစ်အစိုးရ ဆန်.ကျင်းရေးမှာ မြေအောက် အသွင်ဆောင်၊ လှို.၀ှက်လုပ်ငန်းများ ဆိုတဲ. သူတို.ခေါင်းစဉ်နဲ.အသံလှိုင်းတွေကြားမှာ သူတို. မိုးကောင်းခဲ.ပါတယ်။ နိုင်အောင် သောင်းထွန်း ဇော်ဦးကို လုပ်ပိုင်ခွင်.တွေပေးပြီး လုပ်ချင်ရာ လုပ်ခွင်.ပြုခဲ. သူကိုယ်တိုင်က ဦး စိန်ဝင်းဖြစ်ခဲ.ပါတယ်။ ဒေါ်စု နဲ.တော. လုံးလုံးမဆိုင်ပါ။ စစ်အစိုးရ ၀မ်းသာမှာ စိုးလို. ကျူးလွန်ခဲ.သူတွေကို ကို တန်ပြန်ဖို.၊ တန်ပြန်လော်ဘီ လုပ်နိုင်တဲ.သူတွေ၊ ထိထိရောက်ရောက် စွမ်းတဲ. သူတွေကလည်း ၀ါရှင်တန် ဒီစီ ဧရိယာမှာ ရှိမနေကြပါ။ ဒီတော. -အဲဒီ. ကာလတွေ မှာ နိုင်ငံရေးအရ ဟိုဝင်ဒီဝင် လုပ်လို.ရတဲ. အဖွဲ.ဆို ပြောရရင် (အများက မနှစ်သက်သော်လည်း) political mandate ရှိသလိုလို ဖြစ်နေတာဆိုလို. သူတို.ချည်းပဲဖြစ်နေတဲ. ဒီတချက် ပါ ပါတယ်)
၃- ရော်နယ်အောင်နိုင် BBC က ၂၀၀၈ မှာ အလုပ်ပြုတ်ခြင်း ( သုံးသပ်ချက်--ထိရောက်ပါတယ်။ ဒီအရေး လှုပ်ရှားပေးခဲ.သူတွေ လိုတာချက်ချင်းမရသော်လည်း၊ ဒေါ်တင်ထားဆွေကို ဆန်.ကျင်ပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်း အဆင်.ဆင်.တက်ခဲ. ရပေမဲ.၊ ရော်နယ်အောင်နိုင် ၂၀၀၈ မှာ ဘီဘီစီက ရင်နာနာနဲ. ထွက်ခွာ ခဲ.ရပါတယ်။ တဖန် ၂၀၁၂ နှစ် ဥိး မှာ လန်ဒန်က ထိန်လင်း သန်းကြီးမ ဆောင်းပါးအပြီး သူ.ကို အလုပ်ပေးထားတဲ. အင်တာနယူးက ရော်နယ်ကို မဖြစ်မနေ ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ရပါတယ်။ တဖန် ၂၀၁၂ နွေ လတွေမှာ ချင်းမိုင်မှာ လုပ်မဲ. သတင်းသမားများ စီမီနာ မှာ သူ. ကို သင်တန်းဆရာ လေ.ကျင်.ရေးမှုးအဖြစ်လျာ ထားပြီးမှ၊ သူ. အမည်ပါလို. တခြား အထင်ကရ ဂျာနယ်လစ်စ်တွေကကန်.ကွက်ခဲ. တဲ. အတွက်၊ အဲဒီ. သတင်းသင်တန်းကို ငွေပေး စပွန်စာလုပ်တဲ. အမေရီက အခြေစိုက် အန်ဂျီအို ဒါရိုက်တာက သူဆွဲခဲ.ခဲ.တဲ. အစီအစဉ်အတွက် တောင်းပန်ခဲ.ရပြီး ရော်နယ်ကို ချင်းမိုင် မှာ သင်တန်းစကာနီး လေး မှာပဲ၊ အပြင်ကဖိအားတွေကြောင်.ထုတ်ပယ်ပစ်ခဲ.ရပြန်ပါတယ်။ )
You, Nang Aung Htwe Kyi, Soe Lynn, Maungmaung Skw and 59 others like this.
Aye Aye Soe Winhttp://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/NK01Ae01.html
Asia Times Online :: Myanmar: Old atrocity, new implications
October 31, 2012 at 2:32pm · Unlike · 5
Myat Soe သိပ်ကောင်းတယ်၊ ရှယ်ပေးလိုက်အုန်းမယ်။ တသက်လုံးလည်း လက်တွဲလာတယ်၊ အခုထိလည်းဆက်တွဲနေသေးတဲ့၊ပုလင်းတူဗူးဆို့တွေ၊ တမင်မသိချင်ယောင်နေကြသေးတာလား။ အကျိုးအမြတ်တွေအတူတူတွဲရှိ နေသေးတာလားတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ အံ့သြပါရဲ့၊
October 31, 2012 at 3:41pm · Like · 2
Maha Mingyi သေမင်းတွေ သေဒဏ်ပြန်ကျစေရမယ် မှတ်ကရောလာဟဲ့ .............
October 31, 2012 at 7:47pm · Like · 1
Khine Khine Saw Lwin အမ Aye Aye Soe Win ရေ ကြိုက်တယ်
October 31, 2012 at 8:39pm · Like · 1
Hteik Lynn Thanks. Let me Share.
October 31, 2012 at 8:48pm · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi ပြည်တွင်းအင်အား နဲ့ ပြည်ပအင်အား ။ ပြည်တွင်းမီဒီယာနဲ့ ပြည်ပမီဒီယာ ။ တလှမ်းခြင်း တဆင့်ခြင်း တထစ်ခြင်း ။အကျင့်တူ တဲ့ ပုလင်းတူ ဗူးဆို့ တွေကို တရစ်ခြင်း နွှာကြမယ်လေ မ ရေ ။ သွေးအေးရမယ် ။ စိတ်ရှည်ရမယ် ။ လေ မပါ လက် တွေ့ကျကျ လုပ်ကြရမယ် ။ လူ့အခွင့်အရေး တသွင်သွင်အော်ပြီးလူ့အခွင့်အ ရေး ချုိုးဖောက်သူတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေး တခွန်းမှ မဆိုဘဲ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူတွေထက် ပိုပြီးယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းသူတွေဖြစ်တယ် ။ ကျမတို့က ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဘက်ကရပ်တည်လက်တွဲမယ် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဒီ အမှန်တရား အတွက် အခက်အခဲ အများကြားကနေတစိုက်မတ်မတ်လုပ်ခဲ့ကြ တာ ၇ လ ရှိခဲ့ပြီ ။ ရှေ့ဆက်လုပ်သွားကြဦးမှာပါ ။
November 1, 2012 at 2:05am · Edited · Like · 9
Aye Aye Soe Win တနေ.တလံ ပုဂံ နဲ. ကြပ်ကုန်းဘယ်ရွေ.မလဲ၊ စကားလို ထင်ပါ.။ တနေ.တော. ရောက်မှာပဲ။
November 1, 2012 at 6:34am · Like · 2
Nang Aung Htwe Kyi ကျနော် စိတ်ခိုင်ပါတယ်လေ .. မ နားလည်လောက်ပါပြီ ..
November 1, 2012 at 6:43am · Like · 2
Kotoe NB ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
November 1, 2012 at 8:54am via mobile · Like · 2
May Thingyan Hein ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှယ်သွားပါတယ်ရှင်။
November 2, 2012 at 3:05am · Like
Ma Hninse သိတ်ကောင်းတဲ့အတွေးအရေး။ရှယ်ပါတယ်။
November 2, 2012 at 3:18am · Like
Oo Thar ဘာတေးလစ်တနာရဲ့ ဆောင်းပါးမြန်မာပြန်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ဖတ်လိုက်ရပါတယ်၊ ပြန်ဖတ်ချင်လို့ ပြန်ရှာတာ မရတော့ပါ၊ ရှိတဲ့ သူများ ကျေးဇူးပြု ၍ ရှယ်ပေးစေချင်ပါသည်၊
November 2, 2012 at 6:21am · Like
Care Less ဂွတ်..တယ်။
November 2, 2012 at 6:48am · Like
Sein Than so nice,
November 2, 2012 at 8:16am · Like
D Day Ang နောက်ကျလိုက်တာ ! ယမမင်းစစ်တမ်း ၀င်စေချင်ပြီ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူတွေထက် ပိုပြီးယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းသူတွေအတွက်။
November 4, 2012 at 5:40am · Edited · Like · 1
Khaine Khaine Win Like this news, let us share.
November 4, 2012 at 7:13pm via mobile · Like
Maungmaung Skw ဘာတဲလ်း ဆောင်းပါးကို ဒီဝေဖန်ချက်နဲ့
တွဲလိုက်မှ ကျွန်တော်တို့ ဗမာဦးနှောက်
November 6, 2012 at 9:22am via mobile · Like · 1
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 9:47 PM